နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အောင်မြင်မှုအတွက် အခြားနိုင်ငံက ကျရှုံးပေးရန်မလိုအပ်ကြောင်း ရှီက ဆို - Xinhua News Agency
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အောင်မြင်မှုသည် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ကျရှုံးစေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာကြီးသည် နိုင်ငံများအားလုံး သာတူညီမျှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်စေရန် လုံလောက်သည့်အနေအထားရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က အင်္ဂါနေ့က ဆိုသည်။
သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်သည် ၇၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ၏ အထွေထွေဆွေးနွေးမှု၌ ရုပ်သံမိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထိုသို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“မိမိတို့အနေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ချန်လှပ်ထားမှုထက် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အလုံးစုံပါဝင်ရေး လမ်းကြောင်းကိုဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့အနေနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ သာတူညီမျှရှိမှုနှင့် နှစ်ဘက် အကျိုးစီးပွား ရရှိစေဖို့ အပေါ်အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပုံစံသစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ ဘုံအကျိုးစီးပွားများ ကိုဖြန့်ကျက်နိုင်ရန် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှ စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ ကြီးမားတဲ့အကျိုးရလဒ်ကောင်းကို မျှဝေခံစားကြရပါမယ်” ဟုဆိုသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | One country’s success not necessarily another country’s failure: Xi
BEIJING, Sept. 22 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping said on Tuesday that one country’s success does not have to mean another country’s failure, and the world is big enough to accommodate common development and progress of all countries.
“We need to pursue dialogue and inclusiveness over confrontation and exclusion. We need to buildanew type of international relations based on mutual respect, equity, justice and win-win cooperation, and do the best we can to expand the convergence of our interests and achieve the biggest synergy possible,” he said.